Ọhụrụ mmezi maka macOS 10.15.6 | Esi m mac
Ntinye ohuru ohuru maka macOS 10.15.6
Naanị ihe karịrị otu izu gara aga, Apple wepụtara mmelite nkwado maka MacOS Catalina, mmelite nke agbanweghị nọmba mbipute ahụ na nke ahụ edozi nsogbu ndị ọrụ VMWare ha na-eweta ebe ọ bụ na e wepụtara mmelite gara aga. Taa anyị na-eteta na nkwalite ọzọ na - emetụtaghị ọnụọgụ site na nsụgharị Catalina.
N'oge a, mmelite a na-edozi nsogbu ụfọdụ kọmputa nwere mgbe ọ bịara jikọọ na Wi-Fi netwọk na faịlụ mmekọrịta njehie na iCloud Drive, njehie nke mere ka anyị bulite ma ọ bụ budata akwụkwọ echekwara na ọrụ nchekwa nke Apple.
Nke a bụ Nke abụọ nkwado na Apple na-amanye hapụ mgbe macOS Catalina melite 10.15.6. Ọ bụrụ na enweghi nchinchọ ọhụụ, mmelite mmezi a nwere ike bụrụ nke ikpeazụ ị natara, yabụ ọ bụrụ na ngwaọrụ gị esoghị na ụdị Big Sur dakọtara, 10.15.6 ga-abụ mmelite ikpeazụ, ọ bụrụhaala na ọ bụghị. A na-akwụsị ihe mgbochi nchebe nke nwere ike imetụta iguzosi ike n'ezi ihe nke kọmputa ndị Katalina jikwaa.
Dị ka mmelite ndị ọzọ, mmelite mgbakwunye ọhụrụ a dị site na Mmasị sistemụna Mmelite ngwanrọ. Ọ bụrụ na ịnwere mmelite akpaka, agbanweela ngwaọrụ gị.
Mwepụta nke macOS Big Sur
Isi ihe ọhụrụ anyị na-ahụ na Big Sur metụtara metụtara aesthetics, a nnọọ iPadOS aesthetic, na ebe ngosi nke na-a drinksụ site n'ụdị dị na iPad, yana nke anyị nwere ike ịnweta njikwa egwu, nchapụta, njikọta ...
Banyere ntọhapụ nke nsụgharị ikpeazụ, Apple gwara anyị ka anyị daa, ma na-ekwughị kpọmkwem ụbọchị, ụbọchị anyị maara n’izu ndị na-abịanụ, ikekwe n’ihe omume ngosi ahụ ndokwa maka Septemba 15th.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » MacOS Catalina » Ntinye ohuru ohuru maka macOS 10.15.6
Daalụ maka isiokwu ahụ, ihe ọ pụtara bụ na ọ gaghị ahapụ m itinye ya. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu nke kọmputa m, ma ọ bụ onye ọzọ otu ihe ahụ na-eme.
Apple weputara beta nke ise nke watchOS 7
Apple ga-enwe ihe nkpuchi nke aka ya. Mana ọ gaghị ere ahịa ha, ọbụlagodi echere m.